ခလရ ၉၁ မှာပစ်ခတ်မှုဖြစ်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/31/20110အကြံပြုခြင်း
http://www.mediafire.com/file/zjyiiqvb15qzo19/31%20March%20yeyintnge%27s%20Diary.pdf31 March yeyintnge's Diary
မြန်မာ့ သမီး ပျိုဖြူနှစ်ဦး အာဆီယံ မယ်ပြိုင်ပွဲဝင် ရေပန်းစားနေ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/31/20112အကြံပြုခြင်း
အရပ်သား အစိုးရအစစ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြဖို့ ကုလအကြီးအကဲ တောင်းဆို
မြန်မာအစိုးရသစ်ဟာ အရပ်သားစစ်စစ် ဖြစ်ပြီး နှစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါး တိုင်းပြည် အာဏာကို ယူခဲ့တဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဟာ တစခန်းရပ်သွားပြီဆိုတာ သက်သေပြရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို မတ်လ ၃၀ ရက် မနေ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ သူတို့အစိုးရသစ်ဟာ အပေါ်ယံသာမဟုတ်ပဲ တကယ် အမှန်စင်စစ် အရပ်သား အစိုးရအဖြစ်ကို ပြောင်းလဲတာ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာပြည်သူတွေကို သက်သေပြဖို့ အခွင့်အခါကောင်း ဖြစ်သလို သက်သေပြဖို့လည်း တာဝန်ဝတ္တရား ရှိကြောင်း မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက ပြောပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရသစ်အနေနဲ့ နှစ် ၅၀ နီးပါး စစ်ဖက်က တိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ်တဲ့ စနစ်ကနေ တကယ်အမှန် ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ပြဖို့ လိုကြောင်းလည်း မနေ့က ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အကြီးကဲဟာ မနှစ်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ မပါဝင်နိုင်အောင် ကန့်သတ်မှုတွေ ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ကျေနပ်စရာ မဟုတ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာအမတ်များ အာဆီယံလွှတ်တော်မှာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် ခက်ခဲနိုင်
မြန်မာအမတ်တွေကို အာဆီယံလွှတ်တော်မှာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လက်ခံဖို့ ဆိုရင် အဆင့်လိုက် သွားရမဲ့ အခက်အခဲတွေ ရှိနေတယ်လို့ မြန်မာ့ အရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ အာဆီယံလွှတ်တော် အမတ်များအဖွဲ့ AIPMC ဥက္ကဋ္ဌ Kraisak Choonhavan က RFA ကို ပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အာဆီယံလွှတ်တော်မှာ မြန်မာကိစ္စကို အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးကြပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ မြန်မာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့မှာ စိုးရိမ်တဲ့အချက်တွေ အများကြီး ရှိနေလို့ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ် မရှိသေးတာ၊ လူအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိနေတာ၊ လူနေမှုကွာဟချက် ကြီးမားနေတာ စတာတွေကို မဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး လို့ သူက ပြောသွားပါတယ်။
ဒါ့ပြင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက အာဏာ လွှဲပြောင်းပေးလိုက်လို့ စစ်အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်မှု မရှိတော့ဘူး ဆိုပေမဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ လူ့ဘောင် ပေါ်ထွန်းလာနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ အလှမ်းဝေး နေသေးတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲတဲ့အဆင့်ကနေ အတည်ပြုတဲ့ အဆင့်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတဲ့ အဆင့်၊ နောက်ဆုံး အစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းတဲ့ အဆင့်အထိ အဆင့်တိုင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက အဓမ္မ တဖက်သတ် လုပ်သွားတာကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက သိနေပါတယ်လို့ အာဆီယံ လွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ AIPMC ဥက္ကဋ္ဌ Kraisak Choonhavan က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပေါ် အမေရိကန် စိုးရိမ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အစိုးရကနေ အရပ်သား အစိုးရအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမေရိကန် အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းအပေါ် အထူး စိုးရိမ်ကြောင်း မတ်လ ၃၀ ရက် မနေ့က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Mark Toner က ပြောလိုက်ပါတယ်။
စစ်အစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် (ဝဲအစွန်) နှင့် ထိပ်တန်း စစ်ဖက်အရာရှိကြီးများ ၂၀၁၀ မတ်လ ၂၇ ရက်က နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသော တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနား တက်ရောက်နေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ရန် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး များစွာသည် စစ်ဖက်ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခဲ့ကြသည်။ (Photo: AFP)
အတိုချုပ်ပြောရရင် မြန်မာအစိုးရသစ်ဟာ စစ်အစိုးရဟောင်းထဲက အဓိက စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရသစ်ဖြစ်သလို အပြစ်အနာအဆာများတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ လမ်းကြောင်းကနေ ထွက်ပေါ်လာတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်ယူနီဖောင်းချွတ်ပြီး အရပ်သားအဝတ် ပြောင်းလဲထားတဲ့ အစိုးရတရပ်သာ မြင်တွေ့ရသေးကြောင်း Mr. Toner က ပြောပါတယ်။
စစ်ယူနီဖောင်းချွတ်ပြီး အရပ်သားအဝတ် ပြောင်းလဲထားတဲ့ အစိုးရတရပ်သာ မြင်တွေ့ရသေးကြောင်း
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းအပေါ် အထူး စိုးရိမ်ဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေ အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ရဲ့ တရားဝင်ရပ်တည်ခွင့်ကို အသိမှတ်ပြုပေးဖို့နဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ အပါအဝင် စစ်မှန်တဲ့ ဆွေးနွေး အဖြေရှာတာတွေ လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းကြောင်း Mr. Toner က ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ လောလောဆယ်အထိ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုနဲ့ အတူ အစိုးရ အဆင်မြင့် အရာရှိချင်း ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်း ပြောင်းလဲဖို့ အစီအစဉ်မရှိပဲ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း သွားဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြောခွင့်ရသူက ပြောပါတယ်။
မွန်ပါတီမှ ၀န်ကြီးဌာနသုံးနေရာရသော်လည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်အားရစရာမရှိဟုဆို
တပေါင်းလဆုတ် ၁၂ရက်။မတ်ခ်ျ ၃၁၊၂၀၁၁။
ကိုသိုက်(မတ်-၃၁)။ ။ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီအနေနှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးအဖြစ်သုံးဦးအရွေးချယ်ခံရသော် လည်း အာဏာရပါတီမဟုတ်သည့် အတွက်လုပ်ငန်း ဖေါ်ဆောင်ရာတွင်အားရစရာမရှိဟု ပါတီဥက္ကဌဖြစ်သူ နိုင်ငွေသိန်း က ယခုလိုပြောပါသည်။
“ကျွန်တော်တို့ပါတီထဲမှာ ဒေါက်တာမင်းနွယ်စိုးကပြည်နယ်ယဉ်ကျေးမှုဌာန၀န်ကြီး၊ နိုင်လ၀ီအောင်က လျှပ်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးပေါ့။ ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင် နိုင်စိုးသိမ်းကတော့ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီး ရတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ ကိုယ်ကအာဏာရပါတီမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ ပါတီရဲ့လုပ်ငန်းကတော့ ဒီဝန်ကြီးတွေ လုပ် ဆောင်တဲ့နေရာမှာ အားရပါးရလုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ အစိုးရက ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအစိုးရဆိုတော့ အာဏာရ တဲ့အဖွဲ့ရဲ့ စီစဉ်သလိုလုပ်ရမှာပေါ့။
ထို့အပြင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများသည် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှချမှတ်ထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်လစီများကို လွတ်လပ် စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရသလို အထက်ကခွင့်ပြုချက်ရမှသာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိမည်ဟု မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီ ပါတီ၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူနိုင်ငွေသိန်းမှပြောပါသည်။
“လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာ ဥပမာယဉ်ကျေးမှုဌာနဆိုရင်တော့ မွန်အက ကချင်တယ်ဆိုရင်တောင် သူသဘောတူ ရင်လုပ်ပေါ့။ သူသဘောမတူရင်လုပ်လို့ မရဘူးလေ။ ဒါသူ့ပေါ်လစီနဲ့ညိသလား မညိဘူးလားဆိုတာ။ မွန်စာပေ တွေ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအတိုင်းဘဲပေါ့။ သူပြောသင်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်လို့ရမှာပေါ့။ သူပြော ဒါသင်လို့ မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ သင်လို့ဘာရမလဲ။”
သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ဝန်ကြီးများအနေနှင့် ၀န်ကြီးဌာနကို ကိုင်တွယ်ရသည်ဆိုသော်လည်း ထူးခြားမှု မရှိသလို နိုင်ငံတကာတွင် အမြင်ကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ရပ်ဟု လွတ်မြောက်နယ်မြေရှိ မွန်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နိုင်ဥသာမှ ယခုလိုသုံးသပ်ပြောပါသည်။
“ဘာမှမထူးခြားဘူး။ အရင်ကလဲယဉ်ကျေးမှုတို့ စာပေတို့ဘာတို့အစပေါ့။ တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် ဘယ်လိုသဘောထားရမယ်ဆိုတာ ရှိပြီးသားဘဲ။ အရင်တုန်းကလဲ ဒီစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတို့ဟာ သူတို့လက် အောက်ကဘဲလုပ်နေတာ။ သူတို့စိတ်တိုင်းကျဘဲလိုက်လုပ်ပေးနေတာ။ အခုအနေအထားကျတော့ သူတို့ ချည်းဘဲမဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူတွေကရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပြီးတော့ လုပ်တာပါဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာကိုလှည့်ဖြားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုရသွားတာတစ်ခုဘဲထူးတယ်။”
(၁၉၇၄)ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအရ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများသည် မိမိတို့၏စာပေယဉ်ကျေးမှု
ဓလေ့ထုံးစံများကိုလွတ်လပ်စွာသင်ကြားဖေါ်ထုတ်ခွင့်ရှိသည်ဟုပြဌာန်းထားသော်လည်း လက်တွေ့တွင် ဖေါ်ထုတ် ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါသည်။ ယခု(၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေတွင် တိုင်းရင်းသားတို့၏စာပေ ယဉ်ကျေးမှု သင်ကြားဖေါ်ထုတ်ခွင့်ဥပဒေကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဖေါ်ပြထားခြင်းမရှိသလို လွှတ်တော်အတွင်း၌လည်း တိုင်းရင်းသား များ၏အရေးကိုရေရေရာရာပြောဆိုဖြေကြားခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ ထို့ကြောင့် ယခုတက်လာမည့်အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများမျှော်မှန်းသလို စာပေယဉ်ကျေးမှုများကို လွတ်လပ်စွာသင်ကြား ဖေါ်ထုတ်ခွင့် ရမည်မဟုတ်ဟု နိုင်ငံရေးအကဲခတ်များက သုံးသပ်မှုလည်းရှိနေပါသည်။
ဟိန်းမင်း၊ စန္ဒီနွယ်နှင့် ကိုလင်း | ကြာသပတေးနေ့၊ မတ်လ ၃၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၁၆ မိနစ်
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်အတွက် နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၆ နိုင်ငံ၏ အဂတိလိုက်စားမှု အဆင့် စီပီအိုင် CPI- Corruption Perceptions Index 2010 ကို Transparency International အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒုတိယအဆိုးဝါးဆုံး နေရာတွင် ရှိနေသည်။
ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း ကမ္ဘာသိ သင်္ဘောပြန်ပေးအဖွဲ့များ သောင်းကျန်းရာ ဆိုမာလီ နိုင်ငံကို အဂတိလိုက်စားမှု အဆိုးရွားဆုံး နိုင်ငံဟု Transparency International က သတ်မှတ်ပြီး အိုစမာဘင်လာဒင်၏ တာလီဘန်တပ်များ ခိုအောင်းရာဟု အမေရိကန် ယူဆထားသည့် အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ဒုတိယအဆိုးရွားဆုံးဟု ပူးတွဲသတ်မှတ်သည်။
“အခုထိကို ကတ်မလဲရသေးဘူး။ ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်လို့။ ဒီ ၁၂နှစ်ပြည့်က ဟိုးမူလတန်းကျောင်းတက်တုန်းက ကျောင်းမှာ လာလုပ်ပေးကြလို့၊ ပိုက်ဆံမပေးရလို့ လုပ်ဖြစ်သွားတာ။ အခုမှတ်ပုံတင်လုပ်ရင် မကုန်ဘူးဆိုတောင် အနည်းဆုံး တစ်သောင်းတစ်သောင်းခွဲလောက် ကုန်တယ်။”
အောင်သက်ဝိုင်း Thursday, 31 March 2011 18:45
မီးအလင်းရောင်နှင့် နေ့အလင်းရောင်ကြောင့် လင်းထိန်နေသော ခန်းမတခုလုံးတွင် အပ်ကျသံမျှပင် ကြားနိုင်လောက်သည် အထိ တိတ်ဆိတ်လွန်းလှသည်။ လူရာပေါင်းများစွာ ရှိနေသော်လည်း လူအားလုံးက ခန်းမကြီး၏ စင်မြင့်ဆီသို့သာ လှမ်းမျှော်ကြည့်နေကြသည်။
မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့က ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုနေသော သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒု သမ္မတများဖြစ်သော သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးနှင့် ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း (ဓာတ်ပုံ - Timedg)
ရွှေရောင်ကနုတ်များ ခြယ်သထားသည့် အမည်းရောင် ၀တ်ရုံကို ၀တ်ဆင်ထားသော လူကြီးက အ၀ါရောင် ပေါလစ်သုတ်ထားသော စင်မြင့်ထက်တွင် မတ်တပ်ရပ်နေပြီးသူ၏ လက်ထဲမှ အနီရောင် ခပ်ပါးပါးဖိုင်တွဲကို ဖွင့်ပြီး တစုံတရာကို စူးစမ်းနေသည်။
ထိုလူကြီး၏ ဘေးတွင် တိုက်ပုံအဖြူရောင်၊ ခေါင်းပေါင်းနှင့် မြန်မာ့ရိုးရာဝတ်စုံကို သေချာစနစ်ကျနစွာ ၀တ်ဆင်ထားသော လူနှစ်ဦးက သူတို့၏ညာလက်များကို စင်မြင့်ပေါ်တင် ထားသော စာအုပ်ငယ်တခုပေါ်တွင် တင်ထားကြသည်။ ထိုလူနှစ်ဦးဘေးတွင် အ၀ါရောင်ခေါင်းပေါင်းနှင့် ရှမ်းရိုးရာဝတ်စုံကို ဆင်မြန်းထားသူတဦးလည်း ရှိနေပြီး သူကလည်း လက်ကို စင်မြင့်ထက်ပေါ်ရှိ စာအုပ်ငယ်ပေါ်တွင် တင်ထားလိုက်သည်။
ယင်းနောက် အမည်းရောင်ဝတ်ရုံနှင့် လူကြီး၏အသံက တိတ်ဆိတ်နေသော ခန်းမကြီးတွင် ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်လာပြီး စာအုပ်အသီးသီးအပေါ် လက်တင်ထားသူ သုံးဦး၏ အသံကလည်း ညီညာစွာပင် တသံတည်း ထွက်ပေါ်လာသည်။
“ကျွန်ုတို့သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတများအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရပြီးဖြစ်သဖြင့် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများကိုလည်း လိုက်နာပါမည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအပေါ် သစ္စာစောင့်သိ ရိုသေပါမည်။ ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့ကို ထာဝစဉ် ဦးထိပ်ပန်ဆင် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ထို့ပြင် ယခုကျွန်ုပ် ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်သော တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်မည်ဟု လေးနက်တည်ကြည်စွာ ကတိသစ္စာပြုပါသည်” ဆိုသော လူသုံးဦး၏ ပြိုင်တူရွတ်ဆိုသော အသံကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဟု ရွှေရောင်စာလုံးကြီး ရေးထိုးထားသော ခန်းမကျယ်ကြီးတွင် ဟိန်းထွက်နေသည်။
ထိုသုံးယောက်မှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ဒုတိယ သမ္မတ သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးနှင့် ဒေါက်တာ စိုင်းမောင်ခမ်း တို့ဖြစ်ပြီး အမည်းရောင်ဝတ်နှင့်လူမှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ဦးခင်အောင်မြင့်ဖြစ်သည်။
မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့သည် စစ်အစိုးရက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် အနိုင်ရယူထားသော ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ကြံ့ဖွံ့) ၏ ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်၊ စစ်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းလည်းဖြစ်သူ ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်သော ကြံ့ဖွံ့အစိုးရအဖွဲ့ ကတိသစ္စာပြုသောနေ့ (သို့) ကျမ်းကျိန်သောနေ့ဖြစ်သည်။
အစိုးရသစ်တရပ် အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်လာပြီ ဖြစ်သော်လည်း လွှတ်တော်သည် ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ခင်က မျှော်လင့်ထားခဲ့သော လွှတ်တော်မျိုး မဟုတ်သည့်အတွက် ၄င်း၏ဆန္ဒများ မပြည့်ဝပါဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံထားရသူတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “အစိုးရသစ်တခုတော့ တက်လာပြီ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ တရားမျှတမှု၊ ဒီမိုကရေစီ၊ ဥပေဒစိုးမိုးမှုရဖို့ကတော့ သိပ်မမြင်လှဘူး။ အရပ်စကားနဲ့ပြောရရင် ခရီးကြမ်းကို ကျနော်တို့ ဆက်လျှောက်ရဦးမယ်။ ဘယ်လိုကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် လွှတ်တော်မှာ တင်ပြတဲ့အခါ မဲခွဲလိုက်ရင် ကိုယ်တင်ပြတာက သဲထဲရေသွန်ဖြစ်သွားတော့ တကယ့်အရေးကြီးတဲ့ ပြည်သူအတွက် အကျိုးရှိမယ့် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးလို ကိစ္စမျိုးတွေကို ကိုင်တွယ်ဖို့၊ ဥပဒေပြုဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး” ဟု ထောက်ပြသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တဦးကလည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သည့်တိုင် အရေးပါသော နိုင်ငံတော်ရေးရာကိစ္စများကို သိခွင့်မရသေးသဖြင့် အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေသည်။
“သမ္မတနဲ့ အစိုးရ ကတိသစ္စာပြုမယ်ဆိုတာက အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပဲလေ။ ဒါကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့ကို ကြိုတင် အသိမပေးဘူး။ လွှတ်တော်ထဲရောက်မှ သိရတာ။ နောက်ပြီး လွှတ်တော်မှာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ဒု တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်း လာတက်တယ်။ ဒါပေမယ့် နာမည်နဲ့ လူနဲ့ တွဲမသိဘူး။ ကိုယ့်မှာ သိချင်လို့ တပ်က ကိုယ်စားလှယ်တွေလိုက်မေးမှ မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ စိုးဝင်းမှန်းသိရတာ။ နောက်ပြီး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ ဒု ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် လွှတ်တော်ကို ၀င်လာတဲ့အခါ၊ ပြန်ထွက်တဲ့အခါမှာ လွှတ်တော်က အရေးတယူ တလေးတစားနဲ့ ကြေညာတယ်။ ဒါလည်း သဘာဝမကျဘူး ထင်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဝေဖန်သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ မိန့်ခွန်းပြောနေချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်း အောင်လှိုင်နှင့်
ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်းတို့သည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကလည်းဖြစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဟောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးခင်အောင်မြင့်နှင့် တတန်းတည်း ရှေ့ဆုံးမှ အတူထိုင်ပြီး မိန့်ခွန်းနားထောင်ခဲ့သည်။ ဤသို့ နားထောင်ခြင်းသည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ အရှိန်အ၀ါမှာ မြင့်မားကြောင်း သက်သေပြနေသည်ဟု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက သုံးသပ်သည်။
အဖြေသိထားသော ပုစ္ဆာတခု တွက်ရသကဲ့သို့ သမ္မတ ကတိသစ္စာပြုသောနေ့၊ မိန့်ခွန်းပြောသောနေ့သည် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ မကောင်းဘဲ လွှတ်တော်ပြီးဆုံးသည့်အတွက် ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် ပြန်ရမည်ကိုမူ အတော်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်ဟုဆိုသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များလည်းရှိနေသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တဦးက “မနက်ဖြန် အိမ်ပြန်ရောက်မယ်။ ကလေးတွေနဲ့ ခွဲရတာလည်း နှစ်လရှိပြီ။ အခု အိမ်ကိုပဲ စိတ်ရောက်နေတယ်။ နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကတော့ ပါတီနဲ့ သေချာပြန်ပြီး သုံးသပ်ရဦးမယ်။ လောလောဆယ်တော့ အိမ်ပြန်ဖို့ စိတ်စောနေတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလနှင့် မတ်လ နှစ်လလုံး ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သော လွှတ်တော်တွင် ရာထူးများခန့်အပ်ခြင်း၊ အဆိုနှင့် မေးခွန်းများ တင်သွင်းခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ၀န်ကြီးများက ကိန်းဂဏန်းများသုံးကာ အဆိုနှင့် မေးခွန်းများ ဖြေဆိုခြင်းနှင့် ငြင်းပယ်မှုခြင်းများကို အစဉ်တစိုက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပြည်သူများအတွက် အမှန်တကယ်အကျိုးပြုသော ထင်သာမြင်သာရှိသည့် အရေးကိစ္စ တစုံတခုမှ အကောင်အထည်ပေါ်လာခြင်း မရှိပေ။ တချို့သော လွှတ်တော်
အစည်းအဝေးရက်များတွင် ၁၅ မိနစ်ခန့်ဖြင့်သာ အချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့ရပြီး နွေရာသီ နေပူကြောက်သော လွှတ်တော်အမတ်များအဖို့ တည်းခိုရာ နေပြည်တော်စည်ပင်ရိပ်သာတွင် အခန်းအောင်း ချွေးထုတ်ကုန်ဆုံးသည့်ရက်များကလည်း မနည်းလှဟု ဆိုကြသည်။
အတိုက်အခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ကြံ့ဖွံ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကြီးစိုးထားသော လွှတ်တော်တွင် ပြည်သူ့အကျိုးအတွက် ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သော အခြေအနေမရှိဟု ပြောကြသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တဦးက “ဒီငါးနှစ်မှာတော့ ကျနော်တို့ ဘာမှ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်ငါးနှစ်မှာတော့ အင်နဲ့အားနဲ့ အနိုင်ရအောင်လုပ်ပြီး အစိုးရထဲမှာ ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်နိုင်အောင်လုပ်မှကို အဆင်ပြေမယ်” ဟု ပြောသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို မျှော်မှန်းပြီး အားခဲနေသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပညာရှင်များရှိသော်လည်း လက်တွေ့တွင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော မဲလိမ်မဲခိုးမှုနှင့် ပြဿနာများကို အလျင် စဉ်းစား ဖြေရှင်းသင့်သည်ဟု ထင်မြင်သူများကလည်း ရှိနေသည်။
ရန်ကုန်မြို့မှ စီးပွားရေးသမားတဦးက “တခါအလိမ်ခံလိုက်ရပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲဥက္ကဋ္ဌကလည်း သူ့လူ၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် တွေကလည်း သူတို့ခန့်တဲ့လူ။ သူ့လူတွေဝန်းရံပြီး လုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ မဲလိမ်၊ မဲခိုးခဲ့တာတွေ အသိသက်သေတွေ မျက်မြင်တွေနဲ့ လူအားလုံးက မတရားမှန်းသိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူတွေကများ ဆယ်သိန်းအကုန်ခံ တရားစွဲ ခဲ့ကြသလဲ။ အများစုက တရားစွဲလည်း ဘာမှ ထူးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး စိတ်ထားတဲ့ သူတွေချည်းပဲ။ အဲဒါများ နောင်လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမျှော်ဦးမယ်။ ဗေဒင်မတွက်နဲ့၊ နတ်မမေးနဲ့၊ အခုကတည်းက တခါတည်း ဟောကိန်းထုတ်မယ်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲဆိုရင် မဲလိမ်မဲခိုးတာ ဒီ့ထက်ပိုဆိုးမယ်” ဟု ပြောသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်သော ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ လွှတ်တော်တွင် ကတိသစ္စာပြုချိန် အစိုးရရုပ်မြင်သံကြားက
သတင်းကြေညာသော်လည်း ပြည်သူအများစုက စိတ်မ၀င်စားကြောင်း တွေ့ရသည်။ အခြေခံကျဆုံးသော ရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်၊ ခရိုင်နှင့် တိုင်းအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ အမည်မှ ရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်၊ ခရိုင်နှင့် တိုင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူရုံး ဆိုသော ဆိုင်းဘုတ်များကို မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုက်သည်ကိုပင် သတိမမူမိသည့် ပြည်သူများ ဒုနှင့်ဒေးရှိသည်။
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရှမ်းလမ်းရှိ Newday ဆီဆိုင်တွင် ဓာတ်ဆီတန်းစီနေသူ အငှားယာဉ်မောင်းတဦးက “သမ္မတသိန်းစိန် တက်လာတယ်ဆိုလား ပြောသံတော့ ကြားတယ်။ ကိုယ်က ဓာတ်ဆီတန်းဆီနေတာ။ ဒီနေ့ ဆီဖြည့်ပြီးတာနဲ့ ခရီးသည်ရှာရဦးမယ်။ နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားနေလို့ ကိုယ့်နဲ့ ကိုယ့်မိသားစုကို ဘယ်သူက ထမင်းလာကျွေးမှာလဲ။ ဓာတ်ဆီတန်းစီးရတာက ဒီနေ့ကျမှ ကားတော်တော်များတယ်။ ကိုယ်တန်းစီနေတာ နေ့လယ် ၁၂ နာရီကတည်းက။ ကားတအားများတော့ ၂ နာရီခွဲလောက်ကျမှ ဆီရမယ် ထင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
ဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်သော ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ အာဏာစတင်ရယူသော မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ပြည်သူအများစုသည် ရန်ကုန်မြို့၏ လမ်းမများပေါ်တွင် သွားမြဲ၊ လာမြဲ ၊ ပုံမှန်လုပ်နေကျ အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်မပျက် ရှိကြသည်။
ပြည်တွင်းသတင်းထောက်တဦးကမူ ဇတ်ညွှန်းသိရှိထားပြီးဖြစ်သော ပြဇတ်တပုဒ်၏နိဂုံးပိုင်း အဆုံးသတ်သွားပြီဟု ဆိုသည်။
သမ္မတအဖြစ် ကျမ်းကျိန်ပြီးနောက် မိန့်ခွန်းပြောနေသော ဦးသိန်းစိန် (ဓာတ်ပုံ - news.cn)
နေပြည်တော် စစ်ဘက်အသိုင်းဝိုင်းမှ တောက်လျှောက် ထွက်ပေါ်ခဲ့သော ထိပ်တန်းစစ်ရာထူးနှင့် တိုင်းမှူးများ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားသည် ဆိုသောသတင်း၊ ဦးသိန်းစိန် သမ္မတအဖြစ် တာဝန်ယူမည်ဆိုသော သတင်း၊ ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရမြင့်အောင် ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံရသည်ဆိုသော သတင်း၊ ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရမည်ဆိုသောသတင်း၊ မင်းအောင်လှိုင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာထူး အတိုးခံရသည်ဆိုသောသတင်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ရာထူးကို မင်းအောင်လှိုင် ရရှိမည်ဆိုသောသတင်း အပါအ၀င် ပေါက်ကြားလာသော လျှို့ဝှက်ထိပ်တန်း သတင်းအများစုမှာ မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြသွားခဲ့ပြီ။
သို့သော် နေပြည်တော် စစ်ဘက်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ထွက်ပေါ်နေသော နိုင်ငံ့ဥသျှောင်အဖွဲ့ ဖွဲ့မည်ဆိုသော သတင်းတခုသာ သက်သေမပြနိုင်ဘဲ ကျန်ရှိနေသေးသည်။
နေပြည်တော် စစ်ဘက်အသိုင်းအ၀ိုင်းကမူ သမ္မတ ကတိသစ္စာပြုသည့်နေ့ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင်ပင် နိုင်ငံ့ဥသျှောင်အဖွဲ့ အမှန်တကယ်ရှိပြီး ဖွဲ့စည်းထားခဲ့ပြီဟု အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်တွင် ကြယ်ဖြူ တလုံးပါ သုံးရောင်ခြယ် နိုင်ငံတော်အလံသစ် လွှင့်တင်ထားခြင်းမရှိသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရုံးကြီးသည် အဖြူရောင်ကြယ်တံဆိပ်ပါ အနီရောင် ခွပ်ဒေါင်းအလံတော်အောက်တွင်
by Cho Tu Zal on Thursday, March 31, 2011 at 5:42am
အရပ်သားအစိုးရတရပ်ပေါ်ထွန်းလာပြီ ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို သုံးကြတော့ အရပ်သားအစိုးရဆိုတာဘယ်လိုအစိုးရမျိုးပါလဲလို့အတွေးနယ်ချဲ့မိပါတယ်။အရပ်သူအရပ်သားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အစိုးရလို့အကြမ်းဖျဉ်အားဖြင့်တော့ ပြောလို့ရသလို၊ အရပ်သူအရပ်သားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတာ အရပ်သူအရပ်သားတွေအကျိုးစီးပွားအတွက်အဲဒီအရပ်က အရပ်သူအရပ်သားတွေကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ အဲဒီအရပ်သူအရပ်သားတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရလို့ ဆက်စပ်မိလာပါတယ်။ ဒီတော့ အရပ်သားအစိုးရဆိုတာအရပ်အခေါ်လွယ်လွယ်ကူကူခေါ်နေပေမယ့် စာသံပေသံပေါက်အောင်ခေါ်မယ်ဆိုရင် ပြည်သူ့အစိုးရပါပဲ။ ပြည်သူ့အစိုးရဆိုမှတော့ ဒီမိုကရေစီစံတခုဖြစ်တဲ့The government by the people, for the people, of the peopleဆိုတာကို သတိရမိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည် မှာ နှစ်ကာလကြာရှည်စွာ ကွယ်ပျောက်နေတဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရတရပ်ဟာ အမှန်တကယ်ပေါ်ထွန်းလာပြီလားလို့ တွေးကြည့်စရာ၊ မျှော်လင့်စရာပါပဲ။ဒီ့အရင် စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှုနဲ့အရပ်သားအစိုးရအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ဘာကွာမလဲ လို့ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာကြည့်မယ်ဆို စစ်တပ်နဲ့ အရပ်ဘက်နဲ့ ဘာကွာသလဲဆိုတာကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြင်သာထင်သာပါလိမ့်မယ်။ စစ်တပ်ဆိုတာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းပါ။နိုင်ငံတကာ စံထုံးစံထားတွေအရ စစ်တပ်တတပ်ရဲ့အဓိက ဖွဲ့စည်းမှုဟာ အမိန့်နာခံမှု ပါ။ဘယ်စစ်တပ်မဆို တသွေးတသံတမိန့် အမိန့်နာခံမှုရှိမှ အုပ်ချုပ်လို့ရပါတယ်။ စစ်တပ်ထဲ တန်းစီတဲ့အခါမှာ ကြယ်သီးနဲ့ဘောင်းဘီခါးပတ်ခေါင်းနဲ့၊တညီထဲရှိရပါသတဲ့။ မရိုမသေ့စကား ငယ်ပါတောင်ဘောင်းဘီရဲ့ဘယ်မှာဆို ဘယ်မှာ၊ညာမှာဆိုညာမှာ တညီတည်းရှိနေရပါသတဲ့။ ဗိုလ်မှူးဟောင်းတ
ယောက်ပြောပြလို့ ကျွန်တော်တို့ နားထောင်ရင်း ရယ်ခဲ့ရပါတယ်။ စည်းကမ်း ကြီးတာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရပ်ထဲရွာထဲမတော့အဲဒီလို တသွေးတသံတမိန့် လုပ်လို့မရပါဘူး။
အရေးကြီးတာက ဘယ်လောက်ပဲစည်းကမ်းကြီးကြီး၊ ဘယ်လောက်ပဲ အမိန့်နာခံနာခံ ဒါတွေအားလုံးဟာအဲဒီစစ်တပ်ကိုယ်စားပြုတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတာကိုတော့ အမြဲလက်ကိုင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဒါနဲ့ တဆက်တည်း ပြည်သူ့အစိုးရ ပြောင်းပြီဆို စစ်တပ်ကကော၊ တပ်မတော်ကကော ပြည်သူ့တပ်မတော်ပြန်ပြောင်းဖို့မလိုဘူးလားလို့မေးစရာတွေးစရာ ရလာပြန်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေထဲက ပြည်သူတွေအတွက် ပြည်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်မတော် ဆိုတာ မကောင်းလို့လားဗျာ။ ပြည်သူ့တပ်မတော်ဆိုတာ အသုံးအနှုန်းကိုလည်း ပြန်သုံးသင့်တယ်လို့တွေးမိကြောင်းပါ။ ပြည်သူတွေနဲ့တကယ်တသားတည်းဖြစ်ချင်ရင်၊ ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကို တကယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခေါ်အဝေါ်ကအစ အရေးကြီးတယ်ထင်ပါရဲ့ ။
အရပ်သား အရပ်ဖက်မှာတော့ စစ်တပ်နဲ့လုံးလုံးလျားလျားဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ အရပ်သားလူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ် ရဲ့ အဓိကဖွဲ့
စည်းမှု ဟာ ဘာလဲဆိုရင် တော့ စာနာမှု sympathy ပါပဲ။ စာနာစိတ် နဲ့သာ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှသာ အောင်မြင်တဲ့ ယဉ်ကျေးတဲ့ ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက မရှိတဲ့သူကို၊ ရာထူးအာဏာရှိတဲ့သူက မရှိတဲ့သူကို ၊ပညာတတ်တဲ့သူက မတတ်တဲ့သူကို နိုင့်ထက်စီးနင်း ခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခွင့်ရှိနေတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမျိုး၊စာနာမှုကင်းမဲ့တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးကို အောင်မြင်တဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းလုိ့သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။
ဒီတော့ အရပ်သားတွေအရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို စစ်တပ်ပုံစံတသွေးတသံတမိန့်နဲ့ အုပ်ချုပ်လို့ရမရ၊ အောင်မြင်နိုင်မအောင်မြင်နိုင် ကို အထူးပြောစရာတောင်မလိုတော့ပါဘူး။
စစ်တပ်ပုံစံအုပ်ချုပ်တဲ့ စစ်အစိုးရကနေ၊ အရပ်ဖက်ပုံစံ အုပ်ချုပ်မယ့် အရပ်သားအစိုးရ အသွင်ကို ကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာ စစ်ဗိုလ်တွေက
အရပ်ဝတ်လဲပြီး အရပ်သားအဖြစ်ခံယူအုပ်ချုပ်ရုံနဲ့တော့ အောင်မြင်တဲ့ အရပ်သားအုပ်ချုပ်ရေး၊အရပ်သားအစိုးရဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါ
ဘူး။ အရပ်သားလိုတွေး၊ အရပ်သားလိုနေ၊အရပ်သားလို စာနာစိတ်နဲ့ အရပ်သားတွေအကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုမှသာ အရပ်သားအစိုးရကောင်း (၀ါ) ပြည်သူ့အစိုးရကောင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ။
Petition to Call on Malaysian-Japanese Company Asahi Kosei to Respect Workers’ Rights
Petition to Call on Malaysian-Japanese Company Asahi Kosei to Respect Workers’ Rights and Cease Legal Action Against Activist Charles Hector
Charles Hector,alawyer in Malaysia blogged about the case of migrant workers from Burma who faced deportation or termination upon raising legitimate work grievances (including lack of pay, monetary penalities, etc). He is now facingaRM10 million defamation lawsuit from the migrant workers' employer, Asahi Kosei (M) Sdn Bhd.
Civil society throughout the region are extremely concerned about the persecution of human rights defenders in ASEAN, such as Charles Hector. This case also raises serious issues about the lack of respect for migrant workers’ rights, especially those of workers from Burma.
Please takeamoment to sign the petition to call on Asahi Kosei (M) Sdn Bhd, Asahi Kosei Japan Co. Ltd. and all the companies that are (or have been) customers of this company to cause Asahi Kosei to:
Immediately and unconditionally withdraw the legal action against Charles Hector;
Callon Asahi Kosei and everyone, especially governments, to respect the universally recognized rights, duties and obligations of every person and/or organisation to highlight to the public information about wrongs, human rights violations and injustices, as is evident in the UN Declaration on Human Rights Defenders;
Call on Asahi Kosei and the governments of Japan and Malaysia to ensure that justice be done for all affected workers, and to ensure that their rights as workers, including their rights to complain, are recognized and respected at all times.
3 attachmentsDownload all attachments
5795K View Download
30 March yeyintnge's Diary.pdf
3767K View Download
30 March yeyintnge's Diary.doc
30 March yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/30/20110အကြံပြုခြင်း
By ဦးကျော်ဇံသာ ဗုဒ္ဓဟူး, 30 မတ် 2011
သုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်မှာ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ဟာ တကယ့် အာဏာရှိတဲ့လွှတ်တော် မဟုတ်ဘူး၊ လက်ညှိုးထောင်၊ ခေါင်းညိတ်လွှတ်တော်မျှသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေရှိနေပေမယ့် ဒီလွှတ်တော်နဲ့ ပတ်သက်လို့ မျှော်လင့်ထားနိုင်စရာတွေရှိတယ်လို့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (SNDP) အမတ်တဦးက ဆိုပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူကြုံတွေ့ ခံစားရသမျှ ဗွီအိုအေ ကို စာရေးပြောဆိုလာသူ သီပေါမြို့ နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရဲထွန်း ကို ဦးကျော်ဇံသာ က ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါတယ်။
တခုကတော့ သေချာသည် ။ သမတရာထူးကို လွဲပြောင်းရမည်ဟု ပြောဆိုနေကြသည်။ အာဏာလွှဲပြောင်းရေးတော့ မဟုတ်။ သည်တော့ ဦးသိန်းစိန်က ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုရမည်ဟု ဆိုသည်။ ဆိုလျင် သူမည်သည့်နေရာမှာ ကျမ်းသစ္စာဆိုမည်နည်း။ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တို့ထုံးစံအရ ရဟန်းသင်္ဃာ ဆရာတော်မြတ်တို့ ရှေ့ မှာ ကျမ်းသစ္စာဆိုမည်လား။ သည်လိုဆိုလျှင် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ သမတမဟိန္ဒရာဇပါ့တ်စကီ လို့ကျမ်းသစ္စာ ဆိုမည်တော့ မထင်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံက ဗုဓ္ဒဘာသာထွန်းကားသောနိုင်ငံဖြစ်၍ ဘာသာတရားကို အခြေခံကာ ကျမ်းသစ္စာခံယူကြသည်။ သမတမဟိန္ဒ ကျမ်းသစ္စာခံယူချိန်က ခရုသင်းတွင် သစ္စာရေထည့်ကာ အောက်မှာ မုဒ်ဖလားဖြင့် ရေခံထားသည်။ ကျမ်းသစ္စာဆိုနေချိန် သမတမဟိန္ဒက ရေစက်ချနေသည်ကို လက်ဖြင့်ခံကာ ဂတိသစ္စာခံယူရသည်။ သီလသမာဓိနှင့် ပြည့်စုံသော ဆရာတော် အရှင်သူမြတ်-၅၀၀- ခန့် က သမတ ကျမ်းသစ္စာခံယူချိန်တွင် ပရိတ်တရားတော် ချီးမြှောက်ကြသည်။
ယခုမြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဒဘာသာကား သီရိလင်္ကာမှ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တို့ ထုံးစံအရ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံလို ဆရာတော် အရှင်သူမြတ်တို့ ထံတွင် ကျမ်းသစ္စာ ခံယူကြမည်လားဆိုသည်မှာ စဉ်းစားစရာဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေမ၇ှိဟုထင်သည်။ အကြောင်းမှာ သီလသမာဓိနှင့် ပြည့်စုံသောဆရာတော် အရှင်သူမြတ်တို့ မှာ -၂၀၀ရ-ခုနှစ်က ဘုန်းကြီးတွေ သင်္ဃာတွေကို ရက်ရက်စက်စက်သေနတ်နှင့် ပစ်သတ်ထားပြီးဖြစ်သည်ကို ယခုအချိန်ထိ မြင်ယောင်နေကြသည်။ စစ်အစိုးရကမူ သည်ထက် မြင်ယောင်နေကြပါသည်။ ရဟန်းသင်္ဃာတော်တွေကို အလိုလိုနေယင်း သံသယစိတ်တွေနှင့် ရှိနေသော ဗိုလ်ချုပ်မှူးသန်းရွှေနှင့် စစ်အုပ်စုမှာ မည်သည့်အခါမျ ဆရာတော်ရဟန်းသင်္ဃာတော်တွေကို အသိအမှတ်မပြု။
မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ သမတကို ကျမ်းသစ္စကျိန်ဆိုမည့်နေရာတွင် ဆရာတော်ရဟန်းသင်္ဃာတော်တွေရှေ့မှာ မည်သို့ကျမ်းသစ္စာဆိုကြပါမည်နည်း။
ကြည့်လေ ။ ကွှန်ုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံသားတို့အပေါ် ရင်ဝယ်သားကဲ့ သို့ချစ်မြတ်နိုးပြီး ပြည်သူတို့ ၏အလိုကျ စီမံအုပ်ချုပ်သွားပါမည်။ ကျွှန်တော်၏ ကာယအား၊ညာဏအား ဖြင့် ကိုယ်စွမ်းရှိသရွေ့ မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ဆရာတော် ရဟန်းတော် အရှင်သူမြတ်များကို နေ့ ညမပြတ် လက်အုပ်ချီကာ ရှိခိုးပူဇေါ်ပါမည်ဟု ဦးသိန်းစိန်က မည်သူတို့ ရှေ့မှာ သစ္စာ ဆိုပါမည်နည်း။ ဤသစ္စာစကားကို မည်သူယုံကြည်ပါမည်နည်း။
သူသစ္စာဆိုမည့်နေရာမှာ ဘုန်းကြီးတွေ ရဟန်းသဃာင်္တော်တွေကို ပစ်သတ်သော ပြည်သူလူထုကို ပစ်သတ်သော စစ်ဗိုလ်တွေရှေ့မှာ သစ္စာဆိုနေပါလိမ့်မည်။ ယင်းသို့ ဆိုလျင် ဦးသိန်းစိန်ကျိန်သော ယင်းသစ္စာသည်ကား မည်ကဲ့သို့ စူးရှပါမည်လဲ ။ သစ္စာဆိုသည်မှာ စူးပါစေသားဆိုသည်နှင့် ကျမ်းကျိန်သကဲ့သို့စူးရောက်စေသည်။ ယခုမည်သို့သူဆိုသော ကျမ်းသစ္စာ စူးပါမည်နည်း။ ပြီးတော့ မည်သည့်ဆရာတော်ရှေ့မှာမှ သစ္စာ တိုင်သည်မဟုတ်။ သူတိုင်သောနေရာတွင် မြတ်စွာဘုရားဆင်းထုတော်ပင်လျင် တဆူမရှိချေ။ တရားရုံးတော်များတွင် ကျမ်းကျိန်ပြီး ဆိုကြခြင်းမှာ အနောက်နိုင်ငံဥပဒေအရ ကျမ်းစာအုပ်ကို ကိုင်တွယ်ပြီး သစ္စာဆိုကြရသည်။ မဟုတ်မမှန် ထွက်ဆိုပါက စူးပါစေသား စသည်ဖြင့် ကျိန်စာတိုက်ကြရသည်။
ယခုဦးသိန်းစိန်က မည်သူ့ ကို သက်သေထားပြီး ကျမ်းသစ္စာ ဆိုမည်နည်း။ ဘုရားဆင်းထုတော်လည်းမရှိ ။ ဆရာ တော် အရှင်သူမြတ်လည်းမရှိ။
လွှတ်တော်တွင် ကျမ်းသစ္စာ ဆိုသည်မှာ လွှတ်တော်ဥက္ကဌတွေ ၊တရားသူကြီးချုပ်တွေရှေ့မှာ ရသည်ဟု ပြောလျင် ရပါသေးသည်။ သို့ ဆိုလျင် ယင်းပုဂ္ဂိုလ်က ဦးသိန်းစိန်၏ သစ္စာဖေါက်ပြားခဲ့ လျှင် သစ္စာစူးအောင် လုပ်နိုင်ကြပါမည်လား။ ယင်းသို့ လုပ်နိုင်အောင် မည်ကဲ့သို့အာမခံချက်များ ပေးကြမည်နည်။ အဓိပ္ပါယ်မရှိသော အာမခံချက်မျိုးသာဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်။ အကြောင်းမှာ သမတသည် မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုငငံသားများအား ရင်ဝယ်သားကဲံသို့ချစ်မြတ်နိုးသည့်သူမဖြစ်နိုင်။ သူကား စစ်အစိုးရ၏ လက်ကိုင်တုတ်ဖြစ်သောကြောင့် လူ့ အခွင့်အရေးကို ဆက်လက်ချိုးဖေါက်နေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်အောင် ဆက်လက်ဆောင်၇ွက်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်ရဟန်းသင်္ဃာတော်မြတ်များကို အာဏာသိမ်းနိုင်သည်ဟု ထင်မှတ်လျင် သတ်ပစ်မည်ဟု ထာဝရတွေးထားသောသူများဖြစ်လိမ့် မည်။ ထို့ ကြောင့် သူတို့ဆိုမည့် ကျမ်းသစ္စာကား မည်သည့်နည်းနှင့်မျ သစ္စာတရားကို အခြေခံသည်မဟုတ်။
လူသတ်သမားစစ်အုပ်စုများရှေ့တွင် တိုက်ပုံဝတ် လူသတ်သမားများက ကျမ်းသစ္စာဆိုခြင်းမှာ လူများရယ်စရာဖြစ်သည်။ မတရားဖမ်းဆီးခံနေရသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား-၂၀၀၀- ကျော်မှာ ၂၀၀၈-ခုနှစ် ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအရ လွပ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ ယင်းဥပဒေကိုပင် သမတက တာဝန်ကျေပြွန်စွာ ထမ်းရွက်ပါမည်ဟု သစ္စာဆိုသောအခါ သူ့့့ သစ္စာသည်မှန်ကန်ပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်နေမည်မှာ သေချာသည်။ ယင်းမှာ ပြည်သူပြည်သားများကို ရင်ဝယ်သားကဲံသို့ချစ်မြတ်နိုးခြင်းလား။ ဗိုလ်သန်းရွှေဦးစီးသော စစ်အုပ်စုမှာ မိမိတို့လွှတ်တော်အတွင်းမှာပင် ဘယ်နေ့ ဘယ်ကာလမှာ သမတအဖြစ်ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုမည်ကို မပြောဝံ့၇ှာကြ။ ရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်သော နေရာကိုမျှ မပြောဝံ့ခြင်းမှာ ရွံစရာကြီးဖြစ်နေသည်။ ပြသနာတခုမှာ စစ်အစိုးရ၏ နိုင်ငံရေးပရိယယ်ကို နိုင်ငံရေးသမားတို့ က နားမလည်နိုင်ကြသေး။
လွှတ်တော်ကိစ္စသတင်းများ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်မှ သတင်းများကို ပြောဆိုနေသောသူတို့ မှာ နိုင်ငံရေးသမားများဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်တက်ရောက်နေသော ကိုယ်စားလှယ်များက လွှတ်တော်အကြောင်းကို သတင်းးဌါနများသို့ ပြောသည်။ သည်အခါ စစ်အစိုးရက ရိုက်မစစ်ပါဘဲ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ စကားတွေကို ရရှိသွားသည် ။ အကြံအညဏ်တွေကို ရရှိသွားသည်။ သို့ အတူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်မှ ဘာဘဲလုပ်လုပ် စစ်အစိုးရမှ ထောက်လှမ်းရေးလွှတ်ထားစရာမလို ။ အဖွဲ့ ချုပ်အတွင်း မည်သို့ဖြစ်နေသည်။ မည်သို့ လုပ်ကိုင်နေသည်ကို ၏ သည် မရွေး အစကအဆုံးထိ ပြောနေတော့ စစ်အစိုးရက ရေးမှတ်ထားရုံဖြစ်နေသည်။ အခြားတဖက်မှာမူ စစ်အစိုးရမှ မည်သို့ဆောင်၇ွက်နေသည် ။ မည်သို့လုပ်ကိုင်နေသည် ။ လုပ်လာမည်ကို တွက်ချက်နိုင်ရန် မည်သို့ မှ သတင်းအစအန မရနိုင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ယင်းကြောင့် စစ်အစိုးရဘက်က ခြေလှမ်းတကွက်သာနေခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ ကြောင့် စစ်အစိုးရသိရှိသွားအောင် ပြောဆိုနေခြင်းထက် အပြောတွေကို လျော့ပေးဖို့လိုအပ်နေပြီဟုထင်သည်။ နည်းနည်းလောက်ဆင်ခြင်သင့်သည်ဟုမြင်သည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ဆောင်ရွက်နေသော အကြောင်းအရာများကို ပြည်သူများက မသိတာထက် စစ်အစိုးရက သိသွားခြင်းက ကိုယ့်အတွက် အရေးနိမ့်သွားစေတတ်သော ဗျူဟာ တခုဖြစ်နေသည်။ မည်သည့်နေရာ မည်သည့်အချိန်တွင် မည်သူက အင်တာဗျူး ပြုလုပ်ပါသည်ဟု နာမည်နှင့်တကွ ဖေါ်ပြလိုက်တော့ အဖမ်းခံနေရသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားတဦးမှာ ယခုအချိန်ထိ ထောင်ထဲမှာ ရှိနေသေးသည်။ ပြည်တွင်းမှာကော ပြည်ပမှာပါ ပြည်သူတွေကို အားတက်စေလိုသော စိတဆန္ဒတွေ နိုးကြားစေလိုသော အတွေးအေခေါ်တွေ ၇ှိနေကြသည်။ သို့ သော် စစ်အစိုးရဖက်က အခွင့်အရေးယူသွားနိုင်မည့် အကြောင်းအရာမျိုးကို မဟာဗျူဟာမြောက် မပြုလုပ်မိရန် လိုသည်ဟု ထင်သည်။
စစ်အစိုးရ၏ ချွတ်ချော်ကျနေမူများကို ပြောကြသောအခါ အသံတွေထွက်လို့ ရပါသည်။ ယင်းအသံများမှာ ပြည်သူတရပ်လုံးကို အသိညဏ်တိုးပွါးစေခြင်းသာဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် စစ်အစိုးရကို ဖြုတ်ချရန် တာစူနေပြီဖြစ်သည်။ မည်သည့်နေ့ တွင် လူထုတွေက လမ်းမပေါ်သို့အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထွက်လာမည် မသိရသေး။ သို့ သော် တနေ့ နေ့ တော့ ထွက်လာကြမည်ထင်သည်။ အကြောင်းမှာ စစ်အစိုးရကို အီဂျစ်လို စစ်ရေးအရအရေးယူရန် လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုနေကြပြီ။ လက်မှတ်တသိန်းပြည့်လျှင် စစ်အစိုးရကို အရေးယူရန် ပြင်ဆင်နိုင်ပြီဟု သိရသည်။ ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ လူ့ အခွင့်အရေးကောင်စီမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စစ်တပ်မှ အပြစ်မဲ့ လူထုကို ပစ်သတ်ခြင်းများအား အရေးယူရန် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တခုကို ဖွဲ့ စည်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ယင်းစုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှ နအဖစစ်အုပ်စု၏ ရာဇ၀တ်မူကျူးလွန်ထားမူများကို စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ တချိန်တည်းမှာ ယခုဦးသိန်းစိန် က သမတအဖြစ် ဦးဆောင်မည့် အစိုးရသည် လူထုအပေါ် လမ်းမပေါ်ထွက်လာလျင် မပစ်သတ်ရဟု ဆိုသော ဥပဒေတခုကို အမိ န့် ချပေးထားပြီဖြစ်သည်။ ရှေးကကျူးလွန်ထားသော အမူများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်ဟု ဆိုထားရာ နောင်အစိုးရသည်လည်း မကျုးလွန်ရကြောင်း အသိပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ပြောချင်လွန်းကြပြီဆိုလျှင်မူ လမ်းမပေါ်ထွက်အောင်သာ တိုက်တွန်းပေးဖို့အသိရှိစေဖို့ပြောဆိုစည်းရုံးနိုင်ကြ ဖို့ သာလိုသည်။ မည်သို့ ပင်ဆိုစေ သမတဦးသ်ိန်းစိန်မှာ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုလိုက်ပုံကဖြင့် လူသတ်သမားများရှေ့မှာ လူသတ်သမားတဦးက ကျမ်းသစ္စာ ဆိုခြင်းထက် ဘာမျ မထူးဟု ပြောစရာသာ ဖြစ်တော့သည်။ သည်တော့ ဘုရားဆင်းထုတော်ရှေ့မှာ သစ္စာမဆိုရဲသော ငမိုက်သားများဟု ပြောရတော့မည် မဟုတ်ပါလား။
အကျဉ်းကျခံ ရှမ်းခေါင်းဆောင်များကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများက စုပေါင်းဂုဏ်ပြုပွဲ
ခွန်ထွန်းဦးဇနီး ဒေါ်ဝေေ၀လွင်၊ စိုင်းညွန့်လွင်ဇနီး ဒေါ်ခင်အုန်းတင့်၊ကရင်၊ ချင်း၊ ဇိုမီး၊ ကယန်း၊ မွန်၊ ရခိုင်နှင့်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်များ၊ အကျဉ်းကျခံ မိသားစုဝင်များ တက်ရောက်ကြသည်။အထူးဖိတ်ကြားသူများထဲတွင် အဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးဝင်းတင်၊ ဥိးဟံသာမြင့်၊ ဥိးအုန်းကြိုင်၊ ဦးဥာဏ်ဝင်း၊ ဥိးကြည်ဝင်း၊
၀ါရင့်အဖွဲ့မှ သခင်ချန်ထွန်း၊ ဦးထွေးမြင့်၊ ရွေတောင်အုံးမောင်၊စုစုပေါင်း ၃၀ ခန့်တက်ရောက်ကြသည်။
ယခုဖွဲ့ စည်းလိုက်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရအား အယုံအကြည်မရှိကြောင်း ပြန်ကြားလွှာ
၁။ ကျွှန်ုပ်တို့ သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့ အခွင့်အရေးထွန်းကားရေးအတွက် လိုလားသော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါသည်။ ဗြဟ္မာစိုးရ်တရားနှင့် အညီ ကျင့်ကြံအုပ်ချုပ်စီမံသော မင်းကျင့်တရားနှင့်အညီ အုပ်ချုပ်မည့် အစိုးရမျိုးကို လိုလားတောင့်တသူများ ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် ပြည်သူလူထု၏ စစ်မှန်သော စိတ်ဆန္ဒများကို ထုတ်ဖေါ်မပြနိုင်ဘဲ စစ်အစိုးရ၏ လုပ်ကြံမူကြောင့် ၂၀၁၀- ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ ရသည်။ ယင်းရွေးကောက်ပွဲမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် အစိုးရဖွဲ့ စည်းလိုက်ပြီဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂါတ်ကံကြမ္မာကို သူတို့ က ဖန်တီးနိုင်လိမ့်မည်ဟု ထင်မှတ်ထားကြသည်။
ယနေ့ အချိန်တွင် အစိုးရအဖွဲ့ မှာ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပြီး နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မည်ဟု ကြေညာလိုက်ပြီဖြစ်ရာ ဤအစိုးရမှာ ပြည်သူပြည်သားတို့ အား မင်းကျင့်တရားနှင့်အညီ အုပ်ချုပ်လိမ့်မည်ဟု လုံးဝအယုံအကြည် မရှိကြောင်း သိစေအပ်ပါသည်။
၂။ ကျွှန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် လူသတ်သမား စစ်ဘောင်းဘီချွတ် သမတနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ ဝင်ဝန်ကြီးများအား အယုံအကြည်မရှိခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများအား မတရားသတ်ဖြတ်ခြင်း နှင့် အမျိုးအမည်ရေတွက်မရနိုင်သော လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မူများကို ကျူးလွန်ထားသူများဖြစ်၍ မယုံကြည်ကြကြောင်း ကြေညာရခြင်းဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံ လူ့ အခွင့်အရေးကောင်စီမှ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ စစ်အစိုးရအား လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မူများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လည်း ယခုအချိန်ထိ မဆောင်ရွက်သေးကြောင်းကို ထောက်ရှုခြင်းဖြင့် ပို၍ပင် သံသယပွါးစေနိုင်ပါသည်။
၃။ ကျွှန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် ယခုဖွဲ့ စည်းလိုက်ပြီဟု ကြေညာလိုက်သော သမတဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့ ဝင်များ အားလုံးအား ယနေ့ကျွှန်ုပ်တို့့ကြေညာသည့်အချိန်မှစ၍ -၁၉၉၀-ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူတရပ်လုံးက မဲဆန္ဒကို တခဲနက်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်အား ထောက်ခံထားကြသည့်အတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်အား အာဏာလွှဲပြောင်းပေးရန် အကြောင်းကြားလိုက်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်သည် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ရပ်တည်နေသလို -၁၉၉၀- ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်သည်လည်း ပျက်ပြယ်ခြင်း အလျဉ်းမရှိသေးချေ။
၄။ ကျွှန်ုပ်တို့ ပြည်သူတရပ်လုံး၏ တောင်းဆိုမူအတိုင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သော စစ်ဘောင်းဘီချွတ်အစိုးရသည် နိုင်ငံတော်အာဏာလွှဲပြောင်းပေးရန် အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်သည်။ သမတဦးသိန်းစိန်မှာ သမ္မတရာထူးရရှိထားသည့်အတိုင်း မည်သည့်အခွင့်အာဏာ ဟူသမျှကိုမဆို -၁၉၉၀- ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်အား နိုင်ငံတော်အာဏာအား ချက်ချင်း လွှဲပြောင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဤကြေညာချက်အား မလိုက်နာ မဆောင်ရွက်ပါက မြန်မာနိုင်ငံ မီးဟုန်းဟုန်း တောက်နေမည်ဖြစ်ကြောင်း အထူးသတိပေးလိုက်သည်။
၅။ ဤကြေညာချက်သည် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံများအား တရားဝင်ကြေညာခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားများက အယုံအကြည်မရှိကြောင်း အသိပေးခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ သမီး ပျိုဖြူနှစ်ဦး အာဆီယံ မယ်ပြိုင်ပွဲဝင်...
မြန်မာအမတ်များ အာဆီယံလွှတ်တော်မှာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် ခ...
မွန်ပါတီမှ ၀န်ကြီးဌာနသုံးနေရာရသော်လည်း လုပ်ပိုင်ခွ...
Petition to Call on Malaysian-Japanese Company Asa...
မြန်မာနိုင်ငံက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကျမ်းကျိမ်လိုက်ရပ...
အကျဉ်းကျခံ ရှမ်းခေါင်းဆောင်များကို တိုင်းရင်းသားလူ...
ယခုဖွဲ့ စည်းလိုက်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရအား အယုံ...